November 2018 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waxaa jira wax cajiib ah fulinta saabsan aamusnaan eegaysaan daaqada tareenka, ma waxaad u malaynaysaa? Sidaas, ilaawaan frisks ammaanka saaxiib, bacaha Ziplock cad oo cabitaanno ah, eber gaarka ah iyo basaska musqusha-yar. Ma jiro hab ka fiican si ay u sahamiyaan Europe badan tareen ee December. halkan waxaa ku qoran…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waxaad laga yaabaa in agagaarka taas maqlay, laakiin waligaa ma rumaysan. Wadahadalka cuntada tareenka ee macaan, runta kama fogaan - runtii waad ku raaxeysan kartaa qaniinyo kasta oo cuntadaada tareenka ah ah! Wiilasha iyo gabdhaha, jidadka tareenka ee u adeega cuntada wanaagsan a…